Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Senegalese Boulaye Dia Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Boulaye Dia Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinaụlọ (+ Brothersmụnna), Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, nke a bụ akụkọ ihe mere eme nke onye na-ere ọkụ eletrik nke mechara malite ịmalite Ligue 1 na ihe mgbaru ọsọ. Anyị na-amalite site na nwata rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị sie ike, chọta ebe a, nchịkọta nke ndụ ndụ ya - nchịkọta doro anya Boulaye Dia's Bio.
Ihe omuma nke Boulaye Dia.
Ee, ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ mara ya naanị na 2020/2021 - naanị n'oge aha ya nwetara ọfụma dịka igwe nyocha. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ na-aga n'ihu. Anyị na-ewepụta oge anyị iji kwadebe ya - maka ịhụnanya nke football. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, hapụ ka ịmalite.
Boulaye Dia Childhood akụkọ:
Boulaye Dia mụrụ na 16th ụbọchị nke ọnwa 1996 na Oyonnax, obodo nke abụọ kacha biri na mpaghara Auvergne-Rhône-Alpes na ọwụwa anyanwụ France. Ndi French amuru nwa ama nwa bu nwa nke ikpeazu nke ezinulo ya. Ọ bụ ọdụdụ nwa (ụmụ nwoke niile) amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya.
Reims striker toro na ndagwurugwu nke Oyonnax tinyere nnukwu ụmụnne ya. Site n'aka ekpe gaa n'aka nri, ha gụnyere; Harouna, Boulaye (uche anyị), Abou na Diak. Nkekọ dị n'etiti ụmụnne enweghi oke. Site na mbido, ụmụ nwoke niile maara onwe ha nke ọma. Ejikọwo ha ọnụ site n’ụbọchị a mụrụ ha.
Ndia bu umu-nne; Harouna (n'isi isi aka ekpe), Boulaye (nwoke anyị), Abou (n'aka nri) na Diak (n'isi isi aka nri)
Boulaye Dia Ezinụlọ:
Ndị na-agba ọsọ sitere na ezinụlọ dara ogbenye. Nnyocha nwere na nna Boulaye Dia na-egwuri egwu dị ka onye na-agba ọsọ n'ịgba ọsọ na Senegal. Nke a bụ tupu ọ gbapụ mba ahụ gaa France - ịchọ ndụ ka mma. Dị ka nwanne nwanne Boulaye, Harouna si kwuo, Papa ha achọghị ịbụ ọkachamara.
N'oge Boulaye Dia n'oge ọ bụ nwata, ndị ezinụlọ ya biri n'otu ụlọ ebe ha na-ese ebe obibi. Eziokwu ahụ bụ na ụmụnne anọ ahụ nwere otu obere ọnụ ụlọ na-egosi papa ya na mama ya abụghị ọgaranya.
Agbanyeghi na amụrụ na France, ọtụtụ Fans maara na Dia sitere na agbụrụ Senegal. Agbanyeghị, ihe pere mpe bụ Oyonnax, bụ obodo nne ya nwere.
Dị ka esiri maapụ dị na elu elu ahụ, ọ dị naanị nkeji 1 ma ọ bụ 10 nkeji (88.0 km) pụọ na Geneva, Switzerland. Ọzọkwa, obodo French nke Lyon kacha nso Oyonnax - 1 hr 16 min drive (98.0 km). Oyonnax bụ obodo mmepụta ihe na ọwụwa anyanwụ France.
Nnyocha nwere na mgbe ọ bụ nwatakịrị, e nwere echiche nke papa ya na mama ya achọghị ka Dia hụ mebie agụmakwụkwọ bụ isi maka ihe ndị na-adịghị mkpa dị ka egwuregwu. N'ihi nke a, football ghọrọ nke abụọ. Enweghị ndekọ ọ bụla nke Dia na-aga ụlọ akwụkwọ, mana anyị maara na ọ nwere ụdị agụmakwụkwọ teknụzụ.
Boulaye Dia's Untold Football Akụkọ:
Site na mbido, enweghị ihe ndị dị ka ọchịchọ ịghọ pro na bọọlụ. Ọbụna dịka nwatakịrị, naanị ụmụnne ya ndị nwoke na-etinye aka na football. Egwu nke ịhụ nna ha ka ha nwee ọrụ ịgba bọl mere ka ụmụ nwoke mata ihe ize ndụ ndị ahụ.
Agbanyeghị, akara aka ịbụ ọkachamara na bọlbụ bịara n'ụzọ doro anya. N'otu oge, ọdịmma dara n'ezinụlọ Boulaye Dia ka a họpụtara ha igwu egwuregwu 5. Anyị na-ezo aka na ya dị ka asọmpi agbataobi Oyonnax.
Ọ bụ ezie na onye ọ bụla nọ n’ezinụlọ ahụ gara iwe, papa Boulaye jụrụ. Dị ka Harouna nwanne ya nwoke nke okenye si kwuo;
“Papa anyị achọghị ijikere òkè. anyị manyere ya ntakịrị. Mgbe ọ na-aga, ọ chebara ya echiche ma jụ echiche ahụ. ọ mara jijiji wee tụgharịa. ”
Mgbe ha kwurịtachara okwu banyere ya, papa Boulaye na ụmụnne ya ndị nwoke anọ batara. Otu enyi nọrọ na ebe mgbaru ọsọ ahụ nabatara ha. Maka ọ hisụ nke onye ọ bụla, ezinụlọ Boulaye Dia meriri asọmpi ahụ mgbe ha chere ihu na mmeri ọtụtụ ndị mmegide.
Mgbe asọmpi ahụ, onye ndu Plastics Vallée FC, ụlọ ọrụ ama ama nke obodo ahụ, gbagoro ka ya na ndị mụrụ Boulaye Dia kparịta ụka site na mkpọrọhịhị ikpeazụ. Mgbe o kwusịrị okwu na-aga nke ọma, ụmụnne ya nwoke (Harouna na Abou) bịanyere aka na nkwekọrịta ntorobịa mbụ ha. Onye nke anyi Boulaye gbasoro ya mgbe oge gachara. N'okpuru ebe a, ọ wepụtara oge tupu ya edebanye aha maka Plastics Vallee FC.
Na njedebe nke ụbọchị, mgbe ụmụ nwoke ahụ lọtara ọzụzụ, onye ọ bụla n’ime ha tụlere ọrụ ha. Ọ bụ ezie na onye ọ bụla kwuru ihe dị ụtọ banyere arụmọrụ ha, ekweghị Boulaye ikwu okwu. Nke a bụ n'ihi na ụmụnne ya chere na ọ mataghị nke ọma. Mgbe ọ na-agbachi nkịtị mgbe niile, Boulaye gwara ụmụnne ya otu oge;
Unu niile ga-ahụ otu ụbọchị. Ọ bụrụ na ọ dị onye na-aga nke ọma na Football, ọ ga-abụ m.
N'ezie, nwata ahụ aghaghi ụgha. Ọ dịghị onye ọ bụla maara na ọ ga-(na afọ) ga-esonyere ụdị nke Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy na otutu ndi ozo ibu iru nke Senegal ndi otu mba.
Site na football, Boulaye ghọrọ onye na-elekọta ezinụlọ ya. N'ụzọ dị mwute, ụmụnne ya niile (Harouna, Abou na Diak) eruteghị ụwa ọkachamara. Footballgba bọọlụ bụụrụ ha nnukwu oge mana nnukwu ihe na-akpali Boulaye. Anyị ga-agwa gị otu Senegal si nwee ihe ịga nke ọma na ngalaba na-esote nke Ndụ Ndụ ya.
Boulaye Dia Biography - Okporo tozọ A Ma Ama:
Onye na-elekọta ezinụlọ ya tolitere wee bụrụ onye na-ekiri nnukwu ụmụnne ya. N'ezie, ọ na-ewere Harouna, Abou na Diak dị ka ndị nlereanya ya. N'ime ihe niile ha mere, ọ dọtara naanị nke kacha mma. Boulaye bụ nwatakịrị maara ihe nke hụrụ mmejọ nke gburu ụmụnne ya nwoke ma mụta izere ihe ndị a. Ọ debere ochicho ya na azu nke uche ya.
Gwakọta Factory na amu amu Football:
Tupu ịgbawa na Reims, Boulaye Dia nwere amamihe iji chọọ ihe ọzọ ma ọ bụrụ na bọọlụ agaghị arụ ọrụ. Mgbe ọ na-eto eto, ọ ghọrọ onye ọkụ eletrik. Ọbụna mgbe ọ dị afọ iri na ụma, nwata nwoke ahụ maara ihe jiri echiche nke njikwa oge mee ihe. A hụrụ nke a n'usoro ya nke ịrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ eletriki yana na-egwu bọlbụ onye na-amu amu.
Ọnwụnwa ndị dara ada na echiche nke inyefe na football:
Na 12, ọ nwalere aka ya na Saint-Étienne, ị daa. Nnwale ndị na-enweghị isi na Olympique Lyonnais gbasoro. Site na nnabata nke ndị ezinụlọ ya, ọ gara njem njem 752 kilomita na Wales - maka ikpe na Wrexham AFC N'ụzọ dị mwute, nke ahụ mere ka anyị bụrụ ọdịda ọzọ.
Naanị n'oge onye ahụ na-eti ihe nọ na-achọ ịwụkwasị akpụkpọ ụkwụ ya, ezigbo enyi nne na nna ya (site na aha ya; Guy Herbain) gwara ya okwu n’olu ike. N'okwu ya;
“Oge a bụ naanị mgbe m hụrụ ka mmadụ na-agwa m okwu ọjọọ. Ọ gwara m na ọ hụrụ m dị ka onye nzuzu, onye ga-eme naanị nzuzu, ọ bụghị ịkwụsị, ma ọ bụrụ na m kwụnye akpụkpọ ụkwụ m.
Na ụmụnne m ejirila ikike ha mebie… ọ ga-abụkwa oge m ga-ahapụ ya. ”
Boulaye Dia Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Mgbe ọ nụsịrị onye ikpeazụ so n'ezinụlọ ya ka ọ daa mbà, osote onye nchịkwa nke Plastics Vallée FC tinyere aka. Ọ nyere Boulaye nkwekọrịta nkwekọrịta oge, nke mere ka ọ laghachi na football.
N'agbanyeghị na enweghị ụlọ ọrụ ịgba egwu, enyere ya ohere ka emesịa sonye ebe olile anya olile anya nke Jura Sud, 20 km site n'ụlọ ezinaụlọ ya. Mgbe oge atọ gachara, Dia abụrụla nke mbụ otu egwuregwu klọb. Ọ malitere na ọkwa dị ala na Championnat National 2 (nke anọ nke usoro French League). Na oge 2017/2018, Dia nwetara ihe mgbaru ọsọ 15 na 21 anya.
N'ịga n'ihu n'ịdị elu, kpakpando ahụ na-eto eto bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara na Stade de Reims na 16 July 2018 - mgbe oge izizi nke ọma na Jura Sud Foot. Ọ na-egwu egwuregwu isii tupu ya abanye ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ nhọrọ mbụ maka ndị otu egwuregwu.
Kemgbe oge 2019-2020, igwe ihe mgbaru ọsọ agbabeghị azụ. Onye na-eri ihe egosiputa uzo di egwu ma nwee mkpebi siri ike. Dị ka n'oge edere Boulaye Dia's Bio, ọ na-akwado goolu kachasị elu na French Ligue 1 - naanị Kylian Mbappe isi ọzọ. Ihe ngosi a emeela ka klọb buru ibu na Europe nile rịọ maka mbinye aka ya.
Dabere na weebụsaịtị Butfootballclub, Stade de Reims agaghị enwe mma dị n'okpuru akpịrị ya iji ree Boulaye Dia - ebumnuche nke OM, na ọtụtụ ndị otu ọgbakọ klọb. Kedu ụzọ ọ bụla ihe si gbanwee, Fans na-ekwenye na ọ ruru ọrụ dị n'ihu. Maka ezinaụlọ, ọ bụ ebum n’ebumnobi ya, aha ya na akara aka ya n’ikpeazụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ndi Boulaye Dia enwere Nwa nwanyi ma obu nwunye ka ibu?
You nọ ebe a inweta ozi gbasara onye egwu Senegal na ịhụnanya? Nwere agụụ na-agụsi ike ịchọpụta onye bụ enyi nwanyị Boulaye Dia? Otú ahụ ka anyị dịkwa. Site na ewu ewu ya na mma ya, ọ doro anya na ịga n'ihu ga-adọta ụmụ nwanyị nwanyị na-ele onwe ha anya dị ka ihe nwunye.
Lifebogger nwere ike ikwu na Boulaye Dia alụghị di na nwunye (dịka na mbido 2021). O nwekwara ike inwe enyi nwanyị nne na nna ya kwadoro ka ọ bụrụ nne nke ụmụaka ya n'ọdịnihu. Mana na-eche na ọ bụ mbubreyo mbubreyo, ọ dị ya mkpa iwepụta magazin ndị ahụ na-egbukepụ egbukepụ. Onye na-eti ihe (dị ka Jenụwarị 2021) ejirila ụzọ niile iji mee ka mmekọrịta ya na nzuzo.
Boulaye Dia Ndụ Onwe Gị:
N'akụkụ a, anyị ga - enyere gị aka ịmata ụdị onye na - eti ihe - pụọ na football. Na-amalite, ọ bụ onye anaghị echezọ ebe o si bịa na anyị nwere ihe akaebe nke ahụ.
N'otu oge, Boulaye Dia gara leta ndị ọrụ ibe ya na GMC. Nke a bụ ụlọ ọrụ plastik na ụlọ ahịa ebe ọ na-arụ ọrụ tupu ọ bụrụ ọkpọka bọọlụ.
Mgbe o rutere ebe ahụ, ọ gara ozugbo kelee ndị ọrụ ibe ya mbụ, kama ịbịakwute onyeisi ụlọ ọrụ ahụ ozugbo. Ọ bụghị n'ihi na ha sere okwu. Ọ bụ naanị ihe gbasara ịdị umeala n’obi ya.
N'oge ahụ n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Boulaye bụ onye ọrụ ihe atụ na ezigbo onye na-arụsi ọrụ ike. Ndị maara ya ga-asị na ọ na-eme ihe n'oge, anaghị agụ oge ya ma nwee ike imeghari na sutyations niile. Mgbe ọ gbasịrị ọrụ, ọ na-ewere ụkwụ ọlaedo ya maka ọzụzụ ebe ọ na-akwadebe maka ụwa ọkachamara.
Ndụ Boulaye Dia:
Na-ele anya dị mfe ma nwee ọgụgụ isi bụ ihe ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ na-achọ. Dia nke Senegal na-eme ka eziokwu dịịrị onwe ha site na nchịkọta ya dị egwu nke ejiji dị mfe dabara na sneakers dị jụụ. Na mpụga football, ọ na-ebi ndụ dị mfe na Ọ B NOTGH one onye ọhụụ nke ụgbọ ala dị oke ọnụ, ụlọ buru ibu, ụmụ agbọghọ, nnọkọ wdg.
Mgbe ọ dị afọ 24, Boulaye nwere ntụrụndụ nke ọgbọ ọhụụ. Dị ka ọtụtụ kpakpando, ọ hụrụ n'anya igwu egwuregwu vidio na mmasị na-ekiri NBA.
N'iburu n'uche ọrụ agadi ya naanị na 22, ọ dị mfe ịtụle uru nke akụ na ụba ya na-enweghị ego - ọkachasị ka anyị maara ụgwọ ọnwa ya na Stade de Reims. Dịka na mbido 2021, ọnụ ahịa Boulaye Dia bara uru na 750,000 Euros. A na-eme ka ọnụ ọgụgụ a bawanye ka anyị na-echekwa nkọwa ngwa ngwa na-ebugharị ngwa ngwa gbara ya gburugburu.
Boulaye Dia Ndụ Ezinụlọ:
Ka ọ dị ugbu a, anyị niile maara na ebumnuche mgbaru ọsọ abụghị nwa nke nwoke bara ọgaranya, ọ nweghịkwa etolite inwe ihe na beck na oku ya. Boulaye si n'ezinụlọ Senegal dị n'otu. N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị ihe anyị maara banyere ezinụlọ ya.
Banyere ndị nne na nna Boulaye Dia:
Site na mmalite, ha chere na ụmụ ha jidere ma ọ dịkarịa ala ihe (ọ bụghị football) ọbụlagodi gị obere ihe - nke ga - enyere ha aka ịlanarị ndụ. Maka nke a, Boulaye Dia ghọrọ onye njide nke ọkachamara n'ihe gbasara ọkụ eletrik mgbe ọ dị afọ iri na asatọ. Ọ bụrụ na football anaghị arụ ọrụ, ọ gaara adịgide ndụ.
Dabere na IGFM Senegal, Mama Boulaye Dia arụghị ọrụ ọ bụla na papa ya chere nsogbu ahụike nke gbochiri ya ịghọ ndị ịgba egwu bọọlụ. Ọ na-esiri ya ike ịnwe ezumike nká site na football. Obi abụọ adịghị ya, nna nke anọ ga-enwe obi ụtọ nwa nwoke ọ mụrụ ikpeazụ na-ebi nrọ ya.
Banyere oumụnna Boulaye Dia:
Ndị ọkachamara ọkachamara na-agba ọsọ maka Senegal si n'ụlọ Testosterones. Ọbụna gị onwe gị jikọtara na nrọ nke ịghọ ndị na-agba ụkwụ ụkwụ, ọ dịghị akwa ụta ọ bụla na-enweghị ọrụ n'ihi na otu n'ime ha (nke ọdụdụ ha) mere ya.
N'ajụjụ ọnụ nke Boulaye Dia's Brothers, otu n'ime ndị okenye ya, Abou Dia kwuru otu oge;
“Kemgbe anyị dị obere, anyị kwere ibe anyị nkwa nke kwesịrị ịdị n'etiti nwanne. Nke ahụ bụ ịhụnanya!
Anyị agabigala ihe isi ike, enweghị m ike ikwu ihe niile. Anyị na-anọ mgbe niile maka obere onye anyị mere ya, "
Dika ndi okacha amara nke nwere baccalaureate dika onye eletrik na akpa ya, Boulaye Dia na-elekọta umunne ya, ndi nne na nna ya, nne nna ya, nne ya na ndi ikwu ya ndi ozo bi na Oyonnax na Senegal.
Boulaye Dia Eziokwu Eziokwu:
Chịkọta akụkọ anyị na akụkọ ihe mere eme na ọdịnihu dị ebube, anyị na-ewetara gị ụfọdụ eziokwu ị nwere ike ịmaghị.
Eziokwu # 1 - Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na ego kwa sekọnd:
Nweta ego na West African CFA (SAY-fuh) franc.
Kwa Afọ € 572,880 CFA 376,267,488
kwa ọnwa € 47,740 CFA 31,355,624
Kwa Izu € 11,000 CFA 7,224,798
Kwa .bọchị € 1,571 CFA 1,032,114
Kwa elekere € 65 CFA 43,005
Kwa Nkeji € 1 CFA 717
Sekọnd € 0.01 CFA 11.9
Kemgbe ị bidoro ilele Boulaye Dia'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Onu ogugu ndi Senegal nke na-akpata 102,686 CFA / Month ga-arụ ọrụ maka afọ 10 dị egwu iji mee CFA 1,032,114. Nke a bụ ihe Boulaye Dia na-enweta Stade de Reims otu ụbọchị.
Ọtụtụ ekele maka iwepụta oge anyị ịgụ Life Life of Boulaye Dia. N'ime nyocha anyị mere, anyị chọpụtara na Biography ya nwere nkuzi dị mkpa banyere okwu a - Olile anya. N'ihi na Boylaye chọsiri ike dị ka Sadio Mane, enye ama ekeme ndikut unwana ke kpukpru ekim emi ekedukde enye. Ka m na-ede Bio ya, ọ ghọọla A ọla mee na Ligue 1.
Onye ọrụ ọkụ eletrik mbụ ahụ ahụbeghị ihe ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ụmụnne ya - Harouna, Abou na Diak. N'agbanyeghị ịhapụ ọrụ ha, ụmụ okoro ahụ mepụtara ụzọ maka Boylaye. Dịka nwatakịrị maara ihe, ọ mụtara ihe site na mmejọ nke ụmụnne ya, weghaara ya ohere ma too karịa ọrụ ụlọ ọrụ na bọl na-amu amu. Ọ na-esiri nne na nna ya ike - papa ya - ịnagide inwe ọrụ dara ada. Obi dị m ụtọ na nwa ya nwoke nke ikpeazụ nyeghachiri ya nrọ ya.
Na Lifebogger anyị na-eche banyere izi ezi nke ọdịnaya anyị. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko kpọtụrụ anyị. Ma ọ bụghị ya, gwa anyị ihe ị chere gbasara French Genius nke ezinụlọ Senegal. N'ikpeazụ, iji nweta njegharị nchịkọta na Boulaye Dia's Bio, jiri Wiki Isiokwu anyị.
AJ WJIK WIKI:
Aha n'uju: Boulaye Dia
Ụbọchị ọmụmụ: 16th November, 1996.
Ebe amụrụ onye: Oyonnax, France.
Ndị nne na nna: Mr na Mrs Dia.
Ụmụnna: Harouna, Abou na Diak.
Mgbọrọgwụ ezinụlọ: Senegal.
Ogo n'ogo: 5etụ 9 sentimita asatọ.
Elu na Mita: 1.80 m
Onye nnọchi anya: Frédéric Guerra.
Ezigbo Net: 750,000 Euro (2021 stats).
Ọnọdụ egwuregwu: Gaanụ.
Bọchị agbanwee: February 22, 2021